ओ माइ गड ! सफा र चम्किलो देखिनका लागि कुकुरको पिसाब पिउछिन् यी युवती
Thursday,2Aug, 2018 10:54 PM
युवतिहरु आफ्नो सुन्दरताको लागी धेरै प्रयास गर्ने गर्छन् । सुन्दर देखिन वा सुन्दर बन्नको लागी अग्ला अग्ला पहाड चढ्न सक्छन् र सात समुन्द्र पार गर्न पनि । तर के तपाईहरूले सुन्नु भएको छ , सुन्दर देखिनको लागी एक युवतिले कुकुरको पिसाब पिउने गर्छिन् भनेरे !! तपाई हामीलाई यस्तो कुरा सुन्दा पनि घिन लाग्दछ र पत्यार पनि लाग्दैन, तर अमेरिकाकी एक युवतिले आफु राम्रो देखिनको लागी दैनिक कुकुरको पिसाब पिउने गर्छिन् ।
लीनका अनुसार लामो समय देखि सबैजनाले उनको सुन्दरताको कारण सोधि रहेका थिए । उनले सबैलाई दैनिक रुपमा कुकुरको पिसाब पिउनाले पिम्पलहरु नआउने र स्किनलाई चम्किलो राख्ने बताइन् । लीनले आफ्नो कुक्र पार्कमा लगेर उसले गरेको पिसाब जम्मा गरि पिउने गर्छिन् ।
भिटामिन र क्यालसियम
लीन भन्छिन्, अनुहार चम्किलो बनाउनको लागी उनले सधैँ एक कप आफ्नो कुकुरको पिसाब पिउने गर्छिन् । उनी भन्छिन्,“कुकुरको पिसाबबाट भिटामिन ए र भिटामिन ई र १० ग्राम क्यालसियम प्राप्त हुन्छ । यसले क्यान्सर रोग लाग्नबाट बचाउँछ ।”